Condition Ezona ndawo zilungele ukuhambisa amanzi kwi-aquarium | Ngeentlanzi
Isincedisi-manzi yinto ebaluleke kakhulu ukucoca amanzi avela ngokuthe ngqo kwimpompo. kwaye uyenze ifaneleke ukuze iintlanzi zakho zihlale kuyo ngaphandle koloyiko lwechlorine kunye nezinye izinto ezikhoyo emanzini apompo ayingozi empilweni.
Kweli nqaku siza kuthetha ngalo iimveliso ezilungileyo zokumisa amanzi, ukongeza ekukuxeleleni ukuba yeyiphi imeko, xa kufuneka uyisebenzise kwaye isetyenziswa njani. Ukongeza, sicebisa ukuba ufunde elinye inqaku malunga yeyiphi amanzi oza kuyisebenzisa kwi-aquariums ukuba yingcali yokwenyani.
1 Ezona ziPhambili zoMbane waManzi kwi-Aquarium
2 Yintoni isixhobo sokufaka amanzi emanzini kwaye senzelwe ntoni?
3 Ezona ziPhambili zoMbane waManzi kwi-Aquarium
3.1 Isilungisi samanzi esipheleleyo
3.2 I-Tetra Aqua ikhuselekile emanzini etephu
3.3 I-Conditioner enokusetyenziswa okuninzi
3.4 Umcoci wamanzi ococekileyo we-Aquarium
3.5 Ulungelelwaniso loBomi olulula
4 Kufuneka nini ukusebenzisa izixhobo zokupholisa amanzi kwi-aquarium?
5 Ungayisebenzisa njani imeko yokulungisa amanzi e-aquarium
6 Apho ungathenga khona into yokubambisa amanzi enexabiso eliphantsi
Ezona ziPhambili zoMbane waManzi kwi-Aquarium
Umcoci wamanzi ...
Yintoni isixhobo sokufaka amanzi emanzini kwaye senzelwe ntoni?
Isimamisi samanzi, njengoko igama lisitsho, yi Imveliso ekuvumela ukuba uphathe amanzi apompo, anokuhlala eyingozi kwintlanzi, kunye nemeko yokuyiguqula ibe yindawo yokuhlala apho banokuhlala khona.
Yiyo loo nto, izixhobo zokumisa amanzi ziinkonkxa ezizaliswe lulwelo oluthi xa luphoswa emanzini (luhlala lulandela imiyalelo yemveliso, kunjalo) inoxanduva lokususa ezo zinto, njenge klorine okanye ikloramine, eziyingozi kwiintlanzi zakho.
Kwimarike uya kuyifumana izinto ezininzi zokupholisa amanzi, nangona ingezizo zonke ezikumgangatho ofanayo okanye zenza ngokufanayo, ke kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe imveliso ekumgangatho ophezulu (emva kwayo yonke le nto sithetha ngempilo yentlanzi yakho). Silungiselele ukhetho lwakho ngeyona intle:
Isilungisi samanzi esipheleleyo
Isixhobo seSeachem seNwele ...
I-Seachem luphawu oluhle kakhulu nolunye lwezinto zokubeka amanzi ezigqibeleleyo kwimarike. Ayinabungakanani ngaphezulu nangaphantsi kwesine onokuthi ubukhethe ngokuxhomekeke kubungakanani bamanzi aqukethe i-aquarium yakho (50 ml, 100 ml, 250 ml kunye 2 l), nangona isasazeka kakhulu, kuba kufuneka usebenzise i-5 ml (ikepusi enye) yemveliso kwiilitha ezingama-200 zamanzi nganye. I-Seachem Conditioner isusa i-chlorine kunye ne-chloramine kwaye ichithe i-ammonia, i-nitrite kunye ne-nitrate. Ukongeza, ungasebenzisa amanyathelo ahlukeneyo, ngokwemiqondiso yemveliso, ukuziqhelanisa nengxaki yamanzi. Umzekelo, ukuba inenqanaba eliphezulu kakhulu le-chloramine, ungasebenzisa idosi ephindwe kabini, ngelixa iphantsi kakhulu, isiqingatha sedosi siyakwanela (sinyanzelisa ukuba ujonge imveliso ngaphambi kokwenza nantoni na).
I-Tetra Aqua ikhuselekile emanzini etephu
I-Tetra Aquasafe -...
Le mveliso iluncedo kakhulu, kuba ikuvumela ukuba ujike amanzi etepu abe ngamanzi acocekileyo wentlanzi yakho. Ukusebenza kuyafana nokwezinye iimveliso zolu hlobo, kuba iquka kuphela ukuthulula imveliso emanzini (kamva, kwelinye icandelo, siza kukubonisa inyathelo ngenyathelo ukuba ungayenza njani). Nangona ingasasazekanga njengeSeachem, kuba umlinganiso uyi-5 ml nge-10 yeelitha zamanzi, inefomula enomdla kakhulu ekhusela iigill kunye neembrane zentlanzi yakho. Ukongeza, kubandakanya umxube weevithamini ezinceda ukunciphisa uxinzelelo kwizilwanyana zasekhaya.
I-Conditioner enokusetyenziswa okuninzi
Umkhuthuzi weenwele uFluval ...
Ezinye ii-conditioner, ezinje ngale isuka kwiFluval, azenzelwanga kuphela ukubeka amanzi kwimeko yotshintsho lwamanzi, kodwa kananjalo Zingasetyenziselwa ukunciphisa iintlanzi ezisandula ukufika kwi-aquarium, Utshintsho lwamanzi olungephi okanye ukuhambisa iintlanzi kwenye i-aquarium. Kulula ukuyisebenzisa njengezinye iimodeli, isusa iklorine kunye nekloramine, ithomalalisa iintsimbi ezinzima ezinokubakho emanzini kwaye ikhusela amaphiko entlanzi. Ukongeza, ifomula yayo ibandakanya umxube wokuthomalalisa amayeza anceda ukunciphisa uxinzelelo.
Umcoci wamanzi ococekileyo we-Aquarium
Phakathi kwezixhobo zokucoca okanye zokucoca ulwelo lwamanzi acocekileyo sifumana le mveliso ilungileyo, iBiotopol, ethi, ngomlinganiselo we-10 ml yemveliso ngeelitha ezingama-40 zamanzi. inoxanduva lokususa i-chlorine, i-chloramine, ubhedu, ilothe kunye ne-zinc. Ungayisebenzisa kulutshintsho olupheleleyo nolungenamanzi, ukongeza, isebenza ukuphucula ukhuselo lweentlanzi ezisandula kuchacha kwisifo, kuba kubandakanya, njengezinye iimveliso, umxube weevithamini ezinceda ukunciphisa uxinzelelo.
Umcoci wamanzi Iza ngeebhotile ezinesiqingatha seelitha kwaye inokusetyenziswa kwiindawo ezinamanzi apho kuhlala khona iintlanzi kunye nofudo.
Ulungelelwaniso loBomi olulula
Ubomi obuLula AQM0250 ...
Esi sixhobo silula samanzi, esifumaneka kwibhotile eyi-250 ml, yenza nje oko ikuthembisayo: ibeka amanzi etephini kwaye iwenze alungele iintlanzi zakho ngokususa iklorine, ikloramine kunye neammonia. Ukusebenza kwayo kulula nje njengabanye, kuba kufuneka wongeze kuphela inani elibonisiweyo lemveliso kwiilitha zamanzi ezichaziweyo. Ungayisebenzisa zombini kutshintsho lokuqala lwamanzi nakwiindawo ezithile, kwaye inokusetyenziswa nakwiindawo ezinamanzi apho kuhlala khona ufudo.
Kufuneka nini ukusebenzisa izixhobo zokupholisa amanzi kwi-aquarium?
Nangona amanzi etephu ahlala ekhuselekile ukuba abantu bawasele (nangona kungekho rhoqo okanye kuyo yonke indawo), inani lezinto ezingakhuselekanga zentlanzi azipheli. Ukusuka i-chlorine, iichlorines ukuya kwizinyithi ezinzima ezifana nelothe okanye i-zinc, amanzi etephu ayiyondawo ikhuselekileyo yeentlanzi zethu. Ke ngoko, uhlala ucinga malunga nentlalontle yakho, kubalulekile ukusebenzisa isixhobo sokucoca amanzi ukusuka kumzuzu wokuqala.
Izinto zokumisa amanzi zivumela oku ukuba kube njalo. Ukwenza umzekelo, bashiya amanzi empompo njengengubo engenanto apho iintlanzi zakho zihlala khona ngokukhuselekileyo. Emva koko unokusebenzisa ezinye iimveliso eziphucula izinto eziphilayo (Oko kukuthi, umzekelo, kubangela ukuba ibacteria "elungileyo" yande) emanzini e-aquarium yakho kwaye ke ukuphucula umgangatho wobomi beentlanzi kunye nezityalo zakho.
Ekugqibeleni, Kukwabalulekile ukuba unganciphisi ukusetyenziswa kwesixhobo sokupholisa amanzi kutshintsho lokuqala lwamanzi. Landela imiyalelo kwimveliso, eya kukuxelela indlela yokuyisebenzisa, ihlala ineedosi ezisezantsi, kutshintsho oluncinci lwamanzi, okanye imeko yeentlanzi ezisandula ukufika, ukuphucula amajoni omzimba emva kokugula okanye ukunciphisa uxinzelelo.
Ungayisebenzisa njani imeko yokulungisa amanzi e-aquarium
Ukusebenza kokucoca amanzi kwi-aquarium akunakuba lula, nangona kunjalo, ihlala ibangela amathandabuzo ambalwa esiza kuwacoca.
Okokuqala, I-conditioner isebenza ngokulula ngokongeza emanzini e-aquarium, nokuba kungokutshintsha kwamanzi okanye kutshintsho oluyinxalenye (umzekelo, emva kokutsala ezantsi).
Olunye lawona mathandabuzo aqhelekileyo kukuba ingaba imeko yokulungisa inokongezwa ngelixa iintlanzi zikwi-aquarium. Impendulo yile, ngezona meko zilungileyo, zinokwenziwa, kuba zisasazeka emanzini ngephanyazo. Nangona kunjalo, abanye benza ngendlela ecothayo, ke kungcono, ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle, oko beka intlanzi yakho ecaleni kwisitya esahlukileyo ngelixa usongeza imeko amanzi.
Ungayibuyisa intlanzi yakho emanzini kwisithuba semizuzu elishumi elinesihlanu, ubude bexesha eliqhelekileyo elithathwayo ukuze imeko ecothayo isasazeke kwaye isebenze emanzini.
Ngokubanzi, izixhobo zokumisa amanzi zikhuselekile kwiintlanzi zakho, kodwa zinokubulala xa ungabambeleli kwimveliso. Kuba, kubalulekile ukuba unamathele kwinkcazo kwaye ungongezi idosi eyongezelelweyo yesilungisi.
Ekugqibeleni, kwii-aquariums ezintsha, nokuba uwaphatha amanzi ngesixhobo sokulungisa kuya kufuneka ulinde inyanga ukongeza iintlanzi zakho. Kungenxa yokuba zonke ii-aquariums ezintsha kufuneka zihambe ngenkqubo yokuhamba ngebhayisikile ngaphambi kokugcina iintlanzi.
Apho ungathenga khona into yokubambisa amanzi enexabiso eliphantsi
Ungafumana izinto zokulungisa amanzi kwiindawo ezininzi, ngakumbi kwiivenkile ezizodwa. Njengokuba:
En Amazon Awuyi kufumana kuphela izixhobo zomgangatho ophezulu, kodwa kunye namaxabiso ahlukeneyo kunye nemisebenzi eyahlukeneyo (ecocekileyo kunye ne-hard conditioner, anti-stress…). Into emnandi ngale venkile kukuba, ukuba unekhontrakthi ye-Prime khetho, uya kuyifumana ekhaya okomzuzwana. Ukongeza, unokukhokelwa ngamagqabantshintshi ukwazi ukuba yeyiphi efanelekileyo kuwe.
En iivenkile ezizodwa zezilwanyana zasekhayaNjengoKiwoko okanye iTrendenimal, uyakufumana inani elikhulu lezixhobo. Ukongeza, baneenguqu ezibonakalayo, ke ungaya buqu kwaye ubuze imibuzo enokuthi ivele.
Nangona, ngaphandle kwamathandabuzo, lowo unexabiso elingenakuhlawulwa nguye Ikhonkco levenkile enkulu yaseMercadona kunye nonyango lwayo ngugqirha Wu amanzi aphuma kwitetra brand. Nangona kunjalo, ngenxa yobungakanani bayo, kucetyiswa iitanki ezincinci kunye neetanki zentlanzi, hayi abaqeqeshiweyo abasele benetanki elilingana neLake Titicaca, ekucetyiswa ezinye iimveliso kunye neefomathi.
Isicoci samanzi esise-aquarium sisiseko esivumela amanzi ukuba abe yindawo ekhuselekileyo kwiintlanzi zethu. Khawusixelele, usebenzisa luphi unyango ngamanzi? Ngaba kukho uphawu oluthile oluthandayo, okanye awuzange uzame ukusebenzisa i-conditioner okwangoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Isilungisi samanzi se-Aquarium